लायन्स क्बल अफ थाहानगरको चाटर प्रेसिडेन्टमा ढकाल चयन
लायन्स क्बल अफ थाहा नगरको चाटर प्रेसिडेन्टमा सहदेव ढकाल चयन भएकाछन् । हेटौंडामा भएको एक कार्यक्रमकाबीच ढकाल प्रेसिडेन्टमा चयन भएका हुन् । ढकालले आफूलाई चार्टर प्रेसिडेन्टमा चयन हुने अवसर प्रदान गरेकोमा सबैलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै आभार व्यक्त गरेकाछन् । ...
सरकारले नदेखेको पालुङको इन्द्रजात्रा
चर्चामा रहने र सरकारले सार्वजनिक विदा समेत दिने गरेको इन्द्रजात्रा मकवानपुर थाहानगरको पालुङमा पनि मनाइन्छ । यसपालि २० भाद्रमा परेको इन्द्रजात्रा थाहानगरको पालुङमा भव्यताको साथ मनाइएको छ । यद्यपि काठमाण्डौ उपत्यकाको सार्वजनिक विदाले थाहानगरको पालुङलाई छुँदैन । पालुङमा मनाइने इनद्रजात्रालाई सरकारले महत्व दिने गरेको छैन । यहाँ काठमाण्डौमा जस्तै वर्षा र सहकालका देवता देवराज ईन्द्रको पुजा अरधना गरि ईन्द्र जात्रा मनाइन्छ । प्रत्येक बर्ष...
तामाङ राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको विस्तारीत बैठक सम्पन्न
नेकपा माओवादी केन्द्र निकट संगठन तामाङ राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा मकवानपुरको विस्तारीत बैठक सम्पन्न भएको छ । मोर्चाका जिल्ला संयोजक लिलाकुमार घलानको अध्यक्षता साथै पार्टी पोल्युटब्यूरो सदस्य तथा मकवानपुर जिल्ला संयोजक प्रेम बहादु पुलामीको प्रमुख आथित्यता र मोर्चाका फ्याक्सन ईन्चार्ज कमान सिं पाख्रिन (पृथक) लगायतको आतिथ्यतामा बैठक संम्पन्न भएको हो । बैठकले जिल्ला स्थित १ उपमहानगरपालिका र १ नगरपालिका स्रँगै ८ वटा स्थानीय तहकोे केन्द्रलाई...
मकवानपुरका एआईजी र प्रजिअको स्वागत
सामुदायिक सेवा केन्द्र मकवानपुरले ३ नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख प्रहरी अतिरीक्त महानिरीक्षक ( एआईजी) केसरीराज घिमिरे र मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रबहादुर बुढालाई स्वागत गरेको छ । कार्यक्रममा बोल्दै एआजी केसरीराज घिमिरेले ३ नम्बर प्रदेशका नागरीकहरुसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने बताएका छन् । उनले अपराध न्युनिकरणका लागि जनस्तरबाट नै प्रहरीलाई सहयोग गर्न आग्रह समेत गरे । त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख जिल्ला...
मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघले आज आफ्नो सचिवालयमा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई एक कार्यक्रमका बीच स्वागत गरेकोछ । जिल्ला स्तरीय कार्यालयमा आउने नयाँ कार्यालय प्रमुखहरुको स्वागत गर्ने संघको परम्परा अनुसार मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रबहादुर बुढालाई स्वागत गरेको हो । संघका अध्यक्ष राजकुमार न्यौपानेको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा अध्यक्ष न्यौपानेले समग्र मकवानपुरको औद्योगिक तथा व्यापारिक विषयमा आफ्नो धारणा राखेका थिए...
काँग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनाउन सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्छः डा. संग्रौला
नेपाली काँग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य एवं निवर्तमान नेपाल महिला संघकी अध्यक्ष डा। डिला संग्रौलाले आगामी संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा काँग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनाउन एकजुट भएर लाग्नुपर्ने बताएकाछन् । नेपाली काँग्रेस मकवानपुरका कार्यबहाक सभापति विष्णुप्रसाद लामिछानेको सभाध्यक्षतामा मंगलबार भएको छलफल तथा अन्र्तक्रियामा केन्द्रीय सदस्य डा। संग्रौलाले काँग्रेस देशभरी दोस्रो हुनुमा पार्टी नेतृत्वको आफ्नै कमजोरीका कारण रहेको र अव हुने...
नेपाल लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघ थाहानगरको अध्यक्षमा स्याङ्तान
नेपाल लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघ थाहानगरको प्रथम नगर अधिवेशन थाहा नगरमा आइतबार सम्पन्न भएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले पूर्व जिल्ला कमिटी अध्यक्ष तथा प्रदेश नं ३ कमिटी सदस्य रामेश्वर रानाको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न कार्यक्रममा नेकपा एमालेको भातृ संगठन नेपाल लोकतान्त्रिक आदिबासि जनजाति महासंघ थाहा नगर कमिटीसमेत गठन भएको छ । अधिबेशनले बीरमान स्याङ्तानको अध्यक्षतामा २९ सदस्यीय नगर कमिटी चयन गरेको हो । समितिमा सचिव डेनी...
थाहा यातायात प्रा.लि.को अध्यक्षमा रायमाझी
थाहा यातायात प्रा.लि.को अध्यक्षमा अरुण रायमाझी चयन भएका छन् । प्रा.लि. संचालकहरुको भेलाले रायमाझीलार्इ अध्यक्षमा चयन गरेको हो । थाहानगरबाट हेटौंडा तथा काठमाण्डौको लागि सुमो सेवा उक्त कम्पनी मार्फत संचालन भइरहेको छ । थाहा यातायातको अध्यक्षमा यसअघि सुमन प्रकाश विष्ट रहेका थिए । ...
थाहा नगरपालिकाको बजेट विनियोजन पश्चात् हरेक वडाहरुमा कार्यानवयनको चरण रहेको छ । अहिले नगरपालिकाका प्राविधिकहरु वडाका योजनाहरु इस्टिमेटमा व्यस्थ छन् । यसपछि उपभोक्ता समिति गठन गरी विकास आयोजना कार्यान्वयनमा जानेछन् । वडालाई कुन रुपमा विकास गरिदै छ ? वडाका संचभावनाहरु के के छन् ? यिनै विषयमा केन्द्रित भएर यो साता हामीले विकास–बहसमा थाहा नगरपालिका वडा नम्बर ९ का वडा अध्यक्ष परशुराम श्रेष्ठसंग कुराकानी गरेका छौं । तपाई आफ्नो वडालाई कसरी परिचय...